Indlu entle enedama lokuqubha entliziyweni yeTouraine!
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJean Marie
I-Ma maison aux hirondelles yindawo yokuhlala ekhethekileyo kwaye esulungekisiweyo, edityaniswe kwindlu ye-manor yenkulungwane ye-16. Iyonke izuze ekubuyiselweni komgangatho ophezulu. Ubume bendawo kunye neeterraces zivumela ukuzola, ukuzola kunye nomtsalane ngamaxesha onke. Ingakwazi ukuhlalisa abantu aba-4. Ixhotyiswe ngokupheleleyo, ikwaxhamla ekufikeleleni kwidama lokuqubha elikhulu kunye neendawo ezingaphandle ezigcinwe ngokugqibeleleyo.
Ukuhlelwa kweNdawo yokuHlala eneFanitshala: iinkwenkwezi ezi-4.
Izixhobo kunye neenkonzo zikumgangatho ophezulu: umatshini wokuhlamba, umatshini wokucoca, umatshini wokuhlamba izitya, ifriji-ifriji, i-microwave, i-barbecue, oomabonakude, izixhobo zomntwana, ibhedi, ifenitshala yegadi, ukufikelela kwi-intanethi onakho. I-13x7 m yokuqubha eshushu, ekwabelwana ngayo nabanini, itafile yeping-pong kunye neebhayisekile ezi-4 onazo. Igadi enkulu efikeleleka ngokupheleleyo ikulindile!
lo mmandla weSouth Touraine ephakathi kwentliziyo yeenqaba zaseLoire kunye neematshi zasePoitou zizityebi kakhulu kwiinqaba zayo kunye neendawo ezininzi zokufumanisa:
-Loches 35 imizuzu: Cité Royale, Lansyer Museum, Market ngoLwesithathu nangoMgqibelo ekuseni.
-I-Futuroscope yimizuzu engama-30 kude: ipaki entle yokonwabisa kumda wobuchwephesha (kusapho lonke)
-Savin Savin eVienne: Inkonzo yeAbbey yamaXesha Aphakathi engaqhelekanga idume ngemifanekiso ekroliweyo.
-I-Haute Touche Zoo: izilwanyana zayo kwinkululeko ebonakalayo entliziyweni yamachibi aseBrenne.
- I châteaux ye-Loire, ngaphezu châteaux amathandathu ukukhetha ukusuka: Chenonceaux, Ussé nobuhle belele, Villandry kunye nezitiya yayo French-isimbo, Clos Luce kunye uLeonardo da Vinci, Amboise, Cheverny kunye Tintin, Azay le Rideau, ... .
Ngaphandle kokulibala iindawo zokuhlala zaseRabelais naseBalzac kufuphi neChinon.
Siza kukunika lonke ulwazi kunye nezikhokelo ozifunayo ukuhlala kwakho.
Siyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo!
Umnakekeli okanye mna (kwimpelaveki) sikhona kwipropathi ukuze ndikuqinisekise ngokuhlala ungakhathali kunye nokuzola ngokupheleleyo.